ထိရောက်တဲ့ Email တစ်စောင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ? -
၁. ကိုယ့်ရဲ့ Email အတွက် လိုအပ်တဲ့ Campaign တွေ Design နဲ့ Message တွေကို သက်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ကိုအခြေခံပြီး ဖန်တီးရွေးချယ်ပါ။ တိုတိုနဲ့လိုရင်းရောက်တဲ့ပြေပြစ်ချောမွေ့တဲ့ Email တစ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Email ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Message တွေ Image Design တွေပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
၂. ဖန်တီးရေးသားပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကို Browser ကနေတစ်ဆင့်သေချာစီစစ်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Device ကိုသေချာ Check လုပ်ပါ။ Client တွေဆီကိုပေးပို့ရမှာအမှားအယွင်းမပါအောင်ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
၃. ချက်ချင်းပေးပို့ဖို့လိုအပ်တဲ့ Email တွေကိုအလျင်အမြန်ပေးပို့ပီး Schedule ချဖို့လိုအပ်တာတွေကိုအချိန်တိတိကျကျလုပ်ဆောင်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Client နဲ့ Subscriber တွေကိုအလေးထားပါ။
၄. Mail လက်ခံရရှိသူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတိုင်းတာပြီး Track လုပ်ပါ။ Email Client တွေဒါမှမဟုတ် Mail လက်ခံရရှိသူတွေရဲ့ Activity တွေကိုသေချာစီစစ်ပါ။ ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ Email ကိုနှစ်သက်ရဲ့လား စိတ်ဝင်စားမှုရှိသလား ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လဲ စသဖြင့်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၅. ကိုယ့်ရဲ့ Email Client တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေ Social မှာ Sharing လုပ်တာတွေ စတဲ့အချက်တွေကို အကျဉ်းချုပ်ပီး Report ပြုလုပ်ပါ။
ဒီအချက်တွေကို ဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့် ထိရောက်တဲ့ Email တစ်စောင် ကိုဖန်းတီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Monday April 1st, 2019/ Blog/0Comment